🥇 Akhawuntingi kwezorhwebo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 649
Ividiyo ye-accounting kurhwebo
Uku-odola ingxelo kwezorhwebo
Ndisandul 'ukuvula elam ishishini kwaye ndajongana nengxaki enye yokulawula ubalo kwezorhwebo. Ulawulo lokubala ngokubala luthatha ixesha elininzi kunye namandla. Ngapha koko, imeko yempazamo yomntu ikhokelela kwilahleko yemveliso rhoqo kunye nokwehla kwengeniso. Ewe, ndivile malunga neenkqubo eziququzelela ukuphendula kwi-yorhwebo. Nangona kunjalo, ukukhetha omnye ngumceli mngeni njengoko ndingazi ukuba yeyiphi ehambelana neemfuno zeshishini lam.
Baninzi abasaqalayo okanye oosomashishini abanamava abajongana ngqo nengxaki yokungaphendulwa kakuhle kwezorhwebo. Siyazingca ngokunixelela ukuba sikulungele ukufumana esona sisombululo sisiso kule ngxaki. Inkqubo ye-USU-Soft yokwenza ingxelo kwezorhwebo inezibonelelo ezininzi kwaye ikhanya elwandle kwiinkqubo ezifanayo zobalo.
I-USU-Soft accounting kwindlela yorhwebo yeyona nto uhlala uphupha ngayo. Ngoba? Amagama amathathu: Imisebenzi, uyilo, iTekhnoloji yale mihla.
Ewe, ukuchaza yonke imisebenzi ekrelekrele onokuyonwabela ukuba ufaka ingxelo yethu kwinkqubo yorhwebo inika umdla. Kukho ezinye zazo.
Ukulawula konke ukuthengwa kwayo nayiphi na into ethengiswayo ekunika ukuzithemba ekusebenzeni kweshishini lakho. Ukuba unqwenela, inkqubo yobalo-mali lworhwebo ikuvumela ukuba wenze iingxelo ezizodwa ezinika umfanekiso opheleleyo wemeko yeshishini lakho. Ngale ndlela unokuphucula ukubalwa kwemali kwezorhwebo kwaye uyenze isebenze nangakumbi.
Isiseko sedatha sabathengi esikhethekileyo sikuvumela ukuba unxibelelane ngqo nabathengi kwaye ubakhuthaze ukuba bathenge ngakumbi. Ukongeza, kuyacetyiswa ukuba kwenziwe amaqela ahlukeneyo, aya kubandakanya abathengi abaneemfuno ezahlukeneyo kunye neemfuno. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba usebenze ngokwahlukileyo nabo bathanda ukukhalaza ukuba benze konke okusemandleni akho ukungabaniki sizathu sinye. Okanye abathengi abangakhathaliyo ekunokwenzeka ukuba baphuhlise isicwangciso esikhethekileyo sokubasusa kudidi olubaluleke ngakumbi, oko kukuthi, abathengi abaqhelekileyo abathenga rhoqo. Kwaye abathengi abathembekileyo babhetele ukubonelela ngeenkonzo ezizodwa, ze-VIP, kuba ngale ndlela uzuza ukuthembela kwabo okungapheliyo kunye nokunyaniseka.
Kwaye into ekhethekileyo-inkqubo yebhonasi ebalaseleyo, eyilelwe ngokukodwa ukutsala abathengi abaninzi. Ungabukela ukuba, nini kunye nokuthenga ntoni umthengi ufumana iibhonasi. Unokwazisa kwakhona inkqubo yemivuzo yabathengisi kwaye wandise imveliso yabo ngokumangalisayo: ukuthengisa ngakumbi, umvuzo omninzi-uhlala usebenza.
Uyilo lwethu olunomdla olulula nolusebenzisekayo lokuphendula kwiinkqubo zorhwebo lufanelwe kukuqwalaselwa. Ikuvumela ukuba uqonde ngokukhawuleza ukuba usebenza njani kule nkqubo ye-accounting yorhwebo, kwaye yenza ishishini lakho likhuphisane nangakumbi. Musa ukoyika ukuba uyilo lumi ndawonye kwaye uya kukruquka ngokukhawuleza-khetha uhlobo lwe-interface kwincasa yakho kunye nesitayile kwaye uzenzele eyona moya intle yokusebenza kunye nabathengisi bakho. Ukuba ikulungele kwaye ikulungele, uyavuya ke kwaye wenze okusemandleni akho emsebenzini. Yintoni enye into oyifunayo ukuze ujikeleze abo ukhuphisana nabo kwaye uthathe ishishini lakho uye kwinqanaba elilandelayo?
Sinikezela ngeyona shishini lilungileyo kuphela iinkqubo ezilungileyo zohlahlo lwabiwo mali zenziwe ngobuchwephesha obunqabileyo bokulawula ubalo-mali lwakho kurhwebo. Umzekelo, masithathe umbuzo obonakala ulula njengokwazisa abathengi. Sikwenza njani oku? Imeyile? I-SMS? Viber? Konke kunye, kunye nelizwi eliza kuthethathethwano. Sikwazile ukufezekisa iziphumo ezimangalisayo kwaye senza umncedisi welizwi onokubiza abathengi kwaye abanike ulwazi oluyimfuneko. Inomdla, akunjalo?
Ungachithi nawuphi na umzuzu wokuzama ukusebenza ngesandla kunye namava okuqala kwesimo sethu sedemo simahla sokuphendula kwisoftware yorhwebo onokuyikhuphela kwiwebhusayithi yethu. Zibonele ngokwakho ukuba ukusebenza kwe-atomization ye-accounting kurhwebo kwaye kwenze ukuba ishishini lakho lisebenze ngokufanelekileyo!
Njengoko besesitshilo, zininzi iingxaki abenazo usomashishini, onqwenela ukuvula ivenkile yakhe, anyanzelwe ukuba ajongane nayo. Zininzi iimpazamo onokuthi uzenze, ukuzama ukuba nobuchule kunye nemveliso. Zininzi izinto onokulibala ukuzenza ngenxa yobunzima bamaphepha kwaye kunzima ukuqonda imigaqo yolawulo lweshishini. Okokugqibela, zininzi iindlela onokuthi usilele ukuzisebenzisa xa uzama ukutsala abathengi, amaqabane, ukuvelisa amaxwebhu kunye nokusebenzisa iindlela zokuthengisa. Ke, njengoko ubona, kubalulekile ukuthembela kumdlali onamava ngakumbi kule ndawo yentengiso kwaye uvumele le ngcali ukuba ijongane nobunzima, ikuxelele amanyathelo ekufuneka uwenze ukunqanda imiqobo kunye neemeko ezingasombululekiyo.
Ke, iUSU-Soft isebenza njengalo mququzeleli kunye nokuphucula imeko kwivenkile yakho okanye ezivenkileni. Lo mququzeleli uya kuyandisa inkqubo yokuqokelelwa kwedatha kunye nohlahlelo lwayo olulandelayo ngenkqubo yobalo ngokwayo. Kukulungele kwaye kusengqiqweni ukuphumeza ukuphucula oku kwinkampani yakho yorhwebo, kuba izibonelelo kunye nokusilela kokungalunganga kuko okwenza inkqubo yobalo kunye nolawulo ikhetheke kwaye ithandwe yimibutho emininzi yorhwebo ejongene neemveliso, ukuthengisa, abathengi, amaqabane kunye nokuveliswa kwamaxwebhu. Ukusebenza akunzima kakhulu-amanqaku asekiweyo anele ukwenza umbutho wakho ubengcono. Kwangelo xesha, amathuba amaninzi anokongezwa kwisicelo sakho.